Shiinaha caaga ah PET fiilada warshad burushka guriga iyo saarayaasha | Xinjia
Aan Siliconis ahayn
Muuqaalka: laastikada wanaagsan Isticmaalka: BroomFiber Length: 1100mmFineness: 0.20-1.80mm Meelaha Asalka: Jiangsu, Shiinaha
Magaca Summada: XINJIA
Kartida Bixinta: 200000 Kiilogram / Kilogram bishii
Faahfaahinta Baakadaha tube Tuubo PE ah, 25kg hal kartoon bunni ah
Dekedda ： Shanghai ama Nanjing
Midab Markaad codsato macaamiisha
Isweydaarsi Wareeg, saddexagal, god, iwm
Dherer-gooyn 25mm ilaa 1220mm
Ballaca Buundada 50mm ama 80mm
Xirxirida Tuubooyinka PE
Kartoon 25kg ama 30kg, kartoon bunni ah
Waqtiga hogaaminta 15 maalmaha shaqada
Lacag bixinta 30% dhigaal iyo dheelitir ka dhan ah nuqulka B / L
Sababtoo ah dib u soo kabashada foorarsan iyo qaababka farsamada wanaagsan, fiilada PET waxay noqotay bedelka ugufiican ee bristle dabiiciga ah iyo faraska leh codsiyo kaladuwan oo udhaxeeya xaaqmooyinka wanaagsan ilaa burushka rinjiga. Waxaa intaa dheer, fiilada PET waxay haysaa waxqabadka farsamooyinka jirka ee heerkulka ballaaran.
Khibrad XINJIA waxay in ka badan toban sano ka shaqeyneysay fiilooyin balaastig ah, waxay fahansan tahay sida eber-loogu soo bandhigi karo baahiyaha dhabta ah ee ugu adag ee macmiilka, u gaarsiin xalal wax ku ool ah oo wax ku ool ah.
Habka loo qaabeeyey oo loo bedbeddeli karoQaabkeenna la caddeeyay wuxuu noo sahlayaa inaan la kulanno shuruudahaaga waqtiga iyo qiimaha la beegsanayo. Waxaan la qabsaneynaa baahiyahaaga oo waxaan ku mashquulineynaa meel kasta oo ka mid ah warshadaha burushka.
Wadaage aaminayWaxaan ka caawineynaa burushka soo saarayaasha hadafyadaada ganacsi adoo siinaya fiilooyin cusub oo horumarsan. Maaddaama aan nahay xirfadle soo saare fiilo caag ah, waxaan aaminsanahay in sida kaliya ee aan ku qaban karno shaqadeena ay tahay inaan siino qiimo ganacsi oo dhab ah oo la qiyaasi karo.
Ku guuleysteyInta badan ganacsigeennu waa erey-afka oo u mahadceliya macaamiisheenna qiimaha badan. Waxaan u qeexnaa ganacsiga guuleysta mid ka mid ah kuwa aan ka caawin karno macaamiisha inay xoojiyaan tartanka alaabtooda. Rikoorkeena-guushu waa guusha amarradiisa oo sifiican loo dhammeeyay. Fibre kasta waxaa lagu soo saaraa shaqaale khibrad leh iyo kormeerka QC ee adag.
Jawaab celin deg deg ah ayaa loo gudbin doonaa iyada oo ka dhan ah baaritaankaaga 12 saacadood gudahood, shaqaale si wanaagsan u tababaran & khibrad leh ayaa diyaar u ah inay bixiyaan adeeg.
Waqtiga shaqada: 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo, Isniinta ilaa Sabtida (UTC + 8).
Xiriirkaaga ganacsi ee naga dhexeeya wuxuu sir u noqon doonaa cid kasta oo saddexaad.
Adeeg iib ah kadib.
Soo saare xirfadle ah Inaad ku jirtid duubabka balaastigga ah in ka badan toban sano, oo leh 12 khadadka wax soo saarka ayaa hubinaya inaan buuxin karno shuruudaha macaamiisha ee 300 tan bil kasta.
Tayo lagu kalsoonaan karo Waxaan siinaa fiilooyin fiilooyin badan oo caan ah iyo soosaarayaasha xaaqinka gudaha iyo dibaddaba, oo leh tayada waa la damaanad qaaday
Qiimaha tartan Abaalmarinteennace waa la jaan qaadi karaa iyadoo lagu saleynayo tayo sare, iyoqiimaha la doorbido waxaa la bixiyaa markay tiro badan tahay.
Gaarsiinta waqtigeeda Waxaan iska dhigeynaa kabaha macaamiisha waxaanan ballanqaadeynaa inaan bixino gaarsiinta waqtigeeda.
Waxaa jira shirkado badan oo laga kala xusho. Laakiin haddii aad raadineyso hadal yar iyo ficil badan, waxaad si dhakhso leh ugu soo gabagabeyn doontaa inaan nahay xulashadaada ugu fiican.